ड्यानियल रेडक्लिफ गुस्सा प्रशंसकहरू
"हेरी पोटर" को तारा, धेरै अन्य हस्तियों को विपरीत, आफ्नो प्रशंसकहरु को लागि यति संवेदनशील छ कि उनि कहिलेकाहीं अशिष्ट हुन्छन्। त्यसैले, "प्लेब्याक" म्यागजिनसँग एक साक्षात्कारमा, 26 वर्षीया अभिनेताले केही प्रशंसकहरूको अनैतिकताबारे सोधे।
अधिकतर विनम्र र मामूली
रेडक्लिफको केटीले बारम्बार असन्तुष्टसँग कुराकानी गर्न सक्षम भएन, उनीहरूको लागि विनम्र हुन योग्य छैनन्।
यसबाहेक, डेन भन्छन् कि उनको पूर्व सहयोगी हैरी पोटरको विपरीत, Rupert ग्रीन, उहाँलाई थाहा छैन कसरी कसरी भन्न सकिन्छ। "Rupert किन उदाहरण हो? हो, बस किनकि कुनै पनि तरिका प्रशंसकको सामु धेरै शर्मिला भए, "नो" जवाफ दिन असक्षमताको कारण, तिनी आफ्नो घर गए, "अभिनेताले भने।
अर्नोल्ड श्वार्जनेगरको विकास
एम्मा वाटसन र रुपर्ट ग्रिन्ट
केट हडसनको अङ्कको अंकमा इन्स्टिलेले भन्यो कि उनी एक बुरी आमा हुन्
तथापि, तुरुन्तै आफ्नो जीवनको उत्सुक घटनाहरूलाई सम्झाउँछ: "कुनै पनि केटी फोटोग्राफ गर्ने अनुरोधको साथ मलाई आउनुभयो। म उसलाई भन्नुहुन्छ कि पक्कै पनि फोटो बनाउन गरौं भने। प्रतिक्रियामा, मैले एक हतोत्साहित सुने "वास्तवमा, यदि म चाहँदैन, मलाई आउँदैन।" यहाँ अभिनेताले दोस्रो पटक पनि उल्लेख गरे: "एशोसलहरू पनि फोटो खिच्न चाहन्छन्, जबकि वाक्यांश" हो, मैले हेररी पोटर फिल्महरू कहिल्यै मन परेन। " धन्यवाद, मोहम्मद, त्यो मेरो दिन फरक! "
टेल हेडलिस्टन हेलो संग एक साक्षात्कार मा! फिल्म "Vysotka" मा काम को बारे मा भन्यो
बिली बब थर्नटनले पत्रिकामा प्लेब्याक: फोटो फोटो र जोडि पिटको बारेमा एक सहमति
लु डुयोन: "त्यहाँ कुनै आशाहरू छैनन् - कुनै निराशा छैन"
हेलोसँग एक साक्षात्कारमा मिशेल पिफेफर! सिनेमा को बारे मा भन्यो र उनको नयाँ फिलिम मा काम गर्दछ
क्रिश्चियन कथा: "मेरो छोराछोरीको लागि, म सधैँ एक सुपर हीरो हुँ"
पूर्व प्रिय DiCaprio नीना Agdal पत्रिका स्पोर्ट्स इल्स्ट्रिटेटेड को आरोप लगाया मा आरोप लगाया
टीना एल्सल्स, बेयन्सेको आमा, कसरी उनको तारा छोरीको गर्भावस्था वर्णन गरियो
होली बैरी स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि धेरै वर्ष पहिले उनी आफ्नो छोरी गुमाए
गोभीलाइट सागा को सफलता मानसिक स्वास्थ्य को क्रिश्चियन स्टीवर्ट को लागत
जेनिफर लरेन्सको सम्भावना संलग्नताले विशाल हीराको पुष्टि गर्दछ
डिज्नी च्यानलले युवा सेलेना गोमेजको नक्कली स्वरमा प्रोत्साहित गरे!
मार्क Wahlberg ले भन्यो किन उनी9बजे देखि पछि बिछ्यौ
मिशेल विलियम्सले स्वीकार गरे कि उहाँले अझै पनि हीथ लेजरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ
सब्जी स्लिमिंग सूप
प्रजिसन र यूटोजजस्ता - फरक
ओवनमा पन्नीमा गुलाबी सामन
पैरको फ्रिज खोल्नुहोस्
इिन अग्लालोभो र ओलीविया कालोपोले विवाह गरे?
तर्क को विकास को लागि खेलहरु
काली मिर्च "गोगोशरी"
घरमा पेटुनियाको बीउ कसरी इकट्ठा गर्ने?
कसरी वास्तविक महिला बन्ने?
ठुलो केटी कसरी गर्ने?
फैशनेबल कपाल रंग - गर्मी 2016
दुष्ट आँखाबाट ट्याटू
ब्रह्मांडको बारेमा कस्तो सपना छ?
सेतो विवाह काटन
कसरी पेंटको गन्धबाट छुट्नु हुन्छ?
Perennials को फूल को बिस्तर
ब्रुकलिन बेखम र च्लो मोररेट पहिलो पटक उनीहरूको पुनर्मिलन पछि आए
फैशन ब्रोगरको छोरी सिजरियन पछि आफैंको लागि मुस्कुरायो!
जाडोको लागि ब्लुबेरी